News Archives - Page 28 of 41 - Popular
သူ့အနေနဲ့ အရွယ်ကောင်းဖြစ်ပေမယ့် နောက်အိမ် ထောင်ပြုဖို့ အတွက်ကို တော့ စဉ်းစားဖြစ်တော့မှာ မဟုတ် ကြောင်းပြောလာပါတယ်။ ''ရင်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်း ဖြေရ မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် အိမ် ထောင်မပြုတော့ဘူး။ကျွန်တော် ဆုံး ဖြတ်လိုက်ပြီ။ ဒါပေမဲ့ .…
စာရေးဆရာ ညီလာခံ၊ စာပေ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ စတာတွေနဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့ စာရေးဆရာမ မစန္ဒာနဲ့ တွေ့ဆုံခိုက် ဆရာမကြီးရဲ့ လုံးချင်းတွေကို မျှော်နေတဲ့ စာဖတ် ပရိသတ်တွေလည်း ......
အချို့နေရာများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အရ အရေးကြီးသည့် နေရာများတွင်လည်း တိုင်းတာရန်ရှိပြီး သဘာဝဘူမိ ဖြစ်စဉ်အရ ကြေမွဖြစ်စဉ်အရ ထွက်လာသည့်အာဆင်း နစ်ဟု ခေါ်သော စိန်ဓါတ်ပြဿနာသည် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများရှိရာ အာဆင်းနစ်သည် မြန်မာပြည်မှ ထွက်သည့်စပါးများတွင်…
"ဈေးကွက်ထဲက ဒီဇယ်တွေက စက်သုံး စွဲမှုနဲ့ ပျက်ဆီးမှုနှုန်းထားမှာ ကွာတယ်။ ဘု တလင် ဒီဇယ်ဆီက စက်တွေအပျက်အဆီး နည်းတာကို တွေ့ရတယ်''ဟု ဘုတလင်နယ်မှ တောင်သူတစ်ဦးက ပြောပြသည်။ ''အပြင်ရောင်းတဲ့ ဒီဇယ်ဆီဈေးနှုန်းထက် အနည်းဆုံး ၂၅ရာခိုင်နှုန်းသက်သာအောင် .…
ပါ​တော်​မူ​နေ့ အခမ်းအနားများကို အစိုးရမှ ဦးစီးကျင်းပ ​ပေး​စေလိုတယ်​လို့ သီ​ပေါမင်းရဲ့​ ဆွေ​တော်​မျိူးနွယ်များဆို
ကုန်းဘောင်ခေတ် နောက်ဆုံး မင်းဆက်ဖြစ်တဲ့ သီ​ပေါမင်းပါ​တော်​မူနှစ် ၁၃၂ နှစ်​​မြောက်​ အထိမ်း အမှတ်​အ​နေနဲ့ သီ​ပေါမင်းတရားရဲ့ ​ဆွေတော်​မျိုး​တော် ​များမှ .....
Moon Art Gallery ၏ ဒုတိယ ခြေလှမ်းအဖြစ် ပန်းချီဆရာကြီး ခင်မောင်ရင်၏ Kin Maung Yin Solo Show ပန်းချီပြပွဲကို နိုဝင်ဘာ လ ၁၁ရက်၊ ၂ဝ၁၇ (စနေနေ့) နံနက်…
မွေထိုင်းဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံ ကင်မရွန်းနွယ်ဖွား၊ ဟောင်ကောင် နိုင်ငံသား ဂါလာနီရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို MMA မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီ ယံ အောင်လအန်ဆန်းက မြန်မာ့မြေ ပေါ်မှာ နိုဝင်ဘာ ၁၈ရက်ညက ပထ မတစ်ချီနဲ့တင် အနိုင်ယူကာ.......................
ရုပ်ရှင်ညီလာခံအား ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့၊ အမျိုးသားဇာတ်ရုံတွင် ကျင်းပဖို့ ရည်မှန်းထားကြောင်း ဦးဇင်ဝိုင်း ပြော
ဒီဇာတ်ကားများ ရုံတင် နိုင်ဖို့အရေး အကြပ်အတည်းလို့ခေါ်ရမယ့် သဘောရှိပါတယ်။ ဒီအကြပ် အတည်းကိုသာ မှန်မှန်ကန်ကန်မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ရုပ်ရှင်လောက တစ်ခုလုံး ရပ်ဆိုင်းသွားဖို့ရှိပြီးတော့ နိုင်ငံတော်အထိပါ ရိုက်ခတ်သွားနိုင်တဲ့ စီးပွားရေးအကြပ်အတည်းတစ်ခုပါ။ ဒါကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိဖြေရှင်းဖို့ . . .
'ထက်မြက်တဲ့ ဓားသွားပေါ်က ချိုမြမြပျားရည်စက်' စာအုပ်ဟာ မြန်မာဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်က နာဂတောင်တန်းဒေသဆို သွားရောက်နေထိုင်ပြီး လူထုအကျိုးပြု ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ဆရာဝန်တစ်ယောက်၏ အတ္တုပ္ပတ္တိအကြောင်းကို အခြေခံရေးသားထားကြောင်း . . .
Toyota ကုမ္ပဏီမှ Hilux Revo ကားသစ်နှင့် Fortuner ကားသစ်တို့ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဝင် စတင်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချ နေပြီဖြစ်ကာ နောက်ဆုံးပေါ် မော် ဒယ်များအား ယခုအခါတွင် ပိုမိုအား ကောင်းပြီး ဆီစားပိုမို သက်သာသော GD…